ArchLinux + ပထမအဆင့်တွင် Steam ကိုထည့်ပါ Linux မှ
ArchLinux + ပထမအဆင့်တွင် Steam ကိုထည့်ပါ
ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးကောလာဟလတွေအများကြီးကတည်းက Steam အကြောင်းအများကြီးပြောပြီးပါပြီ ရနှေးငှေ့Debian နှင့်အခြားအသုံးပြုမှုများ၌ပင် install လုပ်ခြင်း။
ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ ArchLinux မှာ Steam ကိုဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပြောမယ်၊ installation နဲ့နောက်ဆက်တွဲရဲ့မျက်နှာပြင်တွေ၊ မျက်နှာပြင်မှာရှိတဲ့တခြားဂိမ်းတချို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းငါပြမယ်။
1 ArchLinux တွင် Steam ကို Install လုပ်ပါ
2 ပထမ ဦး ဆုံး Steam ကိုဖွင့်တဲ့အခါ
3 ကျွန်ုပ်တို့၏ Steam စာကြည့်တိုက်သို့ဂိမ်းများကိုမည်ကဲ့သို့ထည့်ရမည်နည်း။
4 Steam မှာဘာဂိမ်းတွေတွေ့နိုင်မလဲ။
5 Steam သည် Linux တွင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုလား။
ArchLinux တွင် Steam ကို Install လုပ်ပါ
steam pack သည် distro ၏တရားဝင် repository ၌တည်ရှိသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ရနိုင်သည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာကျွန်ုပ်တို့သည် 32bits အတွက်ဗီဒီယိုဒရိုင်ဘာများကိုလည်းတပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့လိုချင်သောဂိမ်းအချို့သည် 64bits အတွက်မတွေ့ရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ / etc / pacman.conf) ဤကဲ့သို့သော:
[multilib] ပါဝင်သည် = /etc/pacman.d/mirrorlist
ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့သည် 32-bit package များကိုဆက်လက် install လုပ်သွားပါမည်။
၎င်းကိုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့် Application Menu ထဲမှ Games ကဏ္Menuတွင်တွေ့သင့်သော Steam ကိုဖွင့်သည်။
ကျွန်တော် Terminal မှာ steam လုပ်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ်၊ ဒါကြောင့်တစ်ခုခုမှားယွင်းမှုရှိသလားဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တို့သိလိမ့်မယ်၊ဥပမာအားဖြင့် packet တစ်ခုကိုမတွေ့ပါ၊).
ပထမ ဦး ဆုံး Steam ကိုဖွင့်တဲ့အခါ
ပထမဆုံးအကြိမ်ဖွင့်သောအခါ 200mb update ကိုစတင် download ပြုလုပ်သည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Steam စာကြည့်တိုက်သို့ဂိမ်းများကိုမည်ကဲ့သို့ထည့်ရမည်နည်း။
အဓိက Steam menu bar တွင် Store, Library, Community စသည်တို့ပါ ၀ င်သည်။ သူပြောသည့်နေရာကိုသွားပါ Store က:
အဲဒီမှာငါတို့လိုချင်တဲ့ဂိမ်းကိုရှာနိုင်တယ်၊ အပေါ်ကပုံကငါစစ်ထုတ်စက်တွေ (သို့) options အမျိုးမျိုးကိုဖွင့်တဲ့အခါပေါ်လာတဲ့ရလဒ်တွေကိုပြတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ငါက 'steamos + linux' ကိုပြလိမ့်မယ်၊ ပြီးတော့ရလဒ်ကိုမှာထားလိမ့်မယ်။ စျေးနှုန်းအရ (ပထမ ဦး ဆုံးစျေးပေါသည်) ထို့ကြောင့်အခမဲ့ဖြစ်သော Linux ဂိမ်းများသည်ပထမဆုံးပေါ်လာသည်
ဟုတ်ပါတယ်၊ အခမဲ့ဂိမ်းများTorchlight 2, 80% လျှော့စျေး) သို့သော်ကျွန်ုပ်၌ပိုက်ဆံများစွာကုန်သောသူငယ်ချင်းများရှိသည်။
သင်ထည့်သွင်းရန်ဂိမ်းတစ်ခုရွေးပြီးသည်နှင့် (ကိုနှိပ်ပါ ကစားရန်အခမဲ့) စတင်တပ်ဆင်သည် -
ပြီးသွားတဲ့အခါဂိမ်းကို Application ကဏ္ in၊ Applications မီနူးမှာတွေ့နိုင်သည် -
များစွာသောအရာအမျိုးမျိုးသော ... haha ​​ထွက်ရှိကမ္ဘာသစ်ပါပဲ။
ဂိမ်းများမည်သို့ရှိသည်ကိုသိရန် Steam client ကိုအသုံးပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်သုံးစွဲသူတွင်အခမဲ့ Linux ဂိမ်းများကိုရှာဖွေသည့် filter နှင့်အတူတူပါ၊ Steam ပေါ်ရှိ Linux အတွက်အခမဲ့ဂိမ်းများ
ငါ Steam အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမြင်သောအရာတစ်ခုခု, ငါ PC ကိုတခုတခုအပေါ်မှာ Android ဗားရှင်းရှိသည်သောဂိမ်းများကိုထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်, ဥပမာငါဆိုလို Angry Birds ဂိမ်းသို့မဟုတ် ဂျီသြမေတြီ Dash (ငါချိတ်ဆက်ထားသည့်သို့မဟုတ် အသုံးပြု၍ ပင်ထည့်သွင်းသည့်အခြား site အချို့ကိုမှီခိုနေရလျှင်ပင် ဝိုင်) ငါမင်းကိုမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်လက်တော့ပ်မှာဂိမ်းတွေတပ်ဆင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးကငါ့အတွက်အရမ်းကောင်းပုံရတယ်၊ ဒါဆိုနောက်ပိုင်းငါ (သို့) ငါ့ကောင်မလေး LOL ဆဲလ်ဖုန်းဘက်ထရီကိုဖြုန်းတီးပစ်မှာမဟုတ်ဘူး။
Steam သည် Linux တွင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်အဖြေတစ်ခုလား။
ကောင်းပြီ၊ ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောဖို့အရမ်းကိုသွေးဆောင်ခံရတယ်။ ဒါပေမယ့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့မစဉ်းစားသေးဘူး။
Steam သည်အလုပ်များစွာကိုပြုလုပ်သည်၊ ဘဝကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်၊ ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကောင်းသောဂိမ်းများကိုပေးသည်၊ သို့သော်အခြားဂိမ်းကစားလိုသူများအတွက် (ဝိုး, etc) ကောင်းစွာ PlayOnLinux, Wine နှင့်အခြားအရာများကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အကြောင်းမှာ Windows တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဆုံခဲ့သည့်ဂိမ်းများ (Linux) အတွက်မူကွဲဗားရှင်းမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါဂျီသြမေတြီ Dash ကိုယူပါမယ် (နားမလည်နိုင်လောက်အောင်များစွာသောအရူး ... စွဲ, wtf ရှိကြောင်းဂိမ်း!) ခုနှစ်တွင် ရေနွေးငွေ့ဂျီသြမေတြီ Dash ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၃.၉၉ ကျသင့်သည်။ သို့သော်သင့်အားခွင့်ပြုသည့်ဆိုဒ်များကိုကျွန်ုပ်သိသည် Geometry Dash ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ အခမဲ့၊ ပိုမိုရှင်းပြရန်၊ အသေးစိတ်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုကိုသင်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲနိုင်သည်၊ သင်လိုချင်သည့်နေရာတိုင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်ဖြစ်စေ Steam ကိုသုံးခြင်း (သို့) အသုံးမပြုဘဲထည့်သွင်းခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ သို့သော် World of Warcraft နှင့်မူကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် Steam တွင်ကံမကောင်းစွာဖြင့် Linux ပေါ်တွင်သင်ဖွင့်လိုလျှင်၎င်းကို Windows ကဲ့သို့အတုယူရန် Wine ကိုအသုံးပြုရမည်။
ရနှေးငှေ့ ၎င်းသည် Linux ပေါ်တွင်ဂိမ်းများကိုပျော်မွေ့ရန်အတွက်ယခုအချိန်တွင်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်း၏စတိုးဆိုင်တွင်အချို့ခေါင်းစဉ်များမရှိခြင်းကြောင့်သင်၏လိုအပ်ချက်များကို ၁၀၀% ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
သို့သော်ကျွန်ုပ်ဝန်ခံသည်။ Go Steam ၏ရွေးချယ်မှုများကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အံ့အားသင့်မိသည်။ 😀
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အားကစားပြိုင်ပွဲ » ArchLinux + ပထမအဆင့်တွင် Steam ကိုထည့်ပါ
“ 32 bits” ခြေလှမ်းသည် NVIDIA ရှိသူများသာဖြစ်သည်။ Intel သို့မဟုတ် ATI / AMD ရှိသူတစ် ဦး ဦး သည်ထိုအဆင့်များကိုလိုက်နာရန်မလိုပါ (သို့) အခြားသူများကိုလိုက်နာရန်လိုအပ်သည် (ရှင်းလင်းစွာကျွန်ုပ်မသိပါ၊ အမြဲတမ်း Nvidia ကိုသုံးသည်) : ဟဟားဟား)
ငါ၌ ATI ရှိပြီးငါအဲဒီအချိန်ကအဲဒီခြေလှမ်းကိုယူခဲ့ရသည်
Man ... မင်းမှာ ATI ရှိတယ်၊ ဒီဟာကို install လုပ်လိုက်တယ်။ "lib32-nvidia-utils" ဆိုတာအဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး ... နောက်ဆုံးမှာသင့်မှာမရှိသေးတဲ့ packet တစ်ခုရှိရင် ...
Frikiman ၃၄ ဟုသူကပြောသည်
အမှန်စင်စစ်ဤအဆင့်သည် Nvidia အသုံးပြုသူများအတွက်သာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် (အခမဲ့ dirver ကိုသုံးပါက) lib32-mesa-dri နှင့် (ကျွန်ုပ်တို့စီးပွားဖြစ်သုံးခဲ့ပါက) lib32-catalyst-utils ရှိသူများအတွက်
The Evil အတွင်း (store.steampowered.com/app/268050/) ၏ caliber ခေါင်းစဉ်များသည် Linux အတွက်မရရှိနိုင်ပါကလည်း Steam သည်ကျွန်ုပ်၏နှလုံးကိုမဖျောက်ဖျက်နိုင်ပါ။
win, Linux သို့မဟုတ် mac များအတွက်ခေါင်းစဉ်များသည် universal မဟုတ်ပါကတစ်ခုချင်းစီအတွက် box ကိုသွားရမည်ဆိုလျှင် windows ပေါ်ရှိ steam ပေါ်တွင်အနိုင်ရရန်အရာအားလုံးရှိသည်။
၎င်းတို့သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်မဖြစ်နိုင်ပါ။ သို့သော် အကယ်၍ သင်ပလက်ဖောင်းတစ်ခု (ဥပမာအားဖြင့် Windows) အတွက်ဂိမ်းတစ်ခုကိုဝယ်ယူပါက၎င်းဂိမ်းကိုဖြန့်ချိသည့်မည်သည့် operating system အတွက်မဆိုအသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်လောက်ကပင် (Windows အတွက်) Torchlight II ကို ၀ ယ်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် Linux အတွက်ရရှိနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်မတွေ့ပါကကျွန်ုပ်သည် Linux အတွက် Steam ကိုတပ်ဆင်မည်မဟုတ်ပါ။ ငါထပ်တိုးမပေးဘဲဒေါင်းလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာသိလိုက်ရတော့အံ့သြသွားတယ်။
[ရေခဲ @ ရေခဲ ~] $ ရေနွေးငွေ့
/home/ice/.local/share/Steam/steam.sh: လိုင်း 161: VERSION_ID: မသတ်မှတ်ထားသော variable
Arch 64-bit ပေါ်မှာ Steam ကို run
appid (steam) / version (0) အတွက် breakpad exception handler ကို install လုပ်ခြင်း
libGL အမှား - ဒရိုင်ဘာကို တင်၍ မရပါ - r600_dri.so
libGL အမှား - driver pointer ပျောက်နေသည်
libGL အမှား: r600: driver ကိုမအောင်မြင်ဘူး
libGL အမှား - driver မတင်နိုင်ပါ။ swrast_dri.so
libGL အမှား: swrast: driver ကိုမတင်နိုင်ဘူး
ဂျီသြမေတြီ 2.0 dash ဟုသူကပြောသည်
geometry dash 2.0 ကိုပြန်ပြောပါ
moy zoo သို့ပြန်သွားပါ
၃ ပတ်အစာ ဟုသူကပြောသည်
ဂျီသြမေတြီ dash ဟုသူကပြောသည်
geometry dash သို့ပြန်သွားပါ
Web Development အတွက် Ubuntu (သို့မဟုတ်အခြား distro) ကိုပြင်ဆင်ပါ